Vaovao - Vahaolana granite miloko maivana
Harafesina mavo- Ny zavatra vita amin'ny vato fotsy dia mifamatotra amin'ny oksida vy velona, ​​amin'ny asan'ny rano dia manohy manatsara ny mavo, ny zava-bita farany eo amin'ny vaton'ny vato dia sombina na sombina harafesina. Ny rano mahatonga ny harafesina dia avy amin'ny loharano iray ihany izay mahatonga ny harafesina, ka indraindray hitanao ny rano dia ho hitanao ny harafesina.
Fandotoana- Ny substrate fotsy dia mora tohina amin'ny loto rehetra, noho izany dia tokony esorina ara-potoana ny fahalotoana misy rano mipetaka amin'ny rongony fotsy. Ny loto maloto dia ny tasy loko sy tasy solika. Ho an'ny detergents sasany misy surfactants hampiasaina tsara, raha ireo surfactants ireo ao amin'ny efitrano vato, dia hampiseho ihany koa ny fisehoan'ny fandotoana solika.
Tokony hofidina ireo mpiaro penetrate miorina amin'ny solvent. Amin'ny fanondroana teknika, tsy ny fanoherana rano fotsiny no tokony ho avo, ny tahan'ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanondroana ny asidra sy ny fanoherana alkali ary ny fanondroana ny fanoherana rano dia tokony ho kely, sorohina amin'ny fomba rehetra tsy tokony handray ny vokatry ny rano mitete ho fototra. amin'ny fitsarana ny fiarovana tsara sy ratsy.
Ny lovia dia tsy maintsy maina alohan'ny hametrahana ny mpiaro.
Ny fanodinana fiarovana ny hemp fotsy any ambanin'ny tany fivarotana dia maniry ny hiatrehana ny lafiny 6, ny fikororohana borosy indroa. Ny lafiny koa dia tokony hosodoko tsara.
Rehefa avy nopetahany mari-pana ara-dalàna ny mari-pana fiarovana dia tsy maintsy mitazona telo andro aorian'ny lampivato, ny mari-pana amin'ny 5-15 ℃ raha toa ka mihoatra ny 7 andro ny fanasitranana, sorohy mba hahatratrarana ny fe-potoana farany dia hosasana avy hatrany ny lozan'ny mpiaro fiarovana. lampivato.
Ny ilan'ny lamosin'ny gorodona dia tokony hamatotra sy hamafisina mba hanonerana ny fitaoman'ilay mpiaro ny fiarovana amin'ny dity simenitra.
Ny velaran-javatra vita amin'ny vato aorian'ny fametrahana ny magazay dia tsy te-hametaka takelaka, ny periphery dia mifofofofo akaiky, ny seam board dia apetraka ao amin'ny magazay aorian'ny fametahana 3 herinandro ny famenoana.
Ny fikojakojana ny tany hemp fotsy koa dia tokony handinika ny fifehezana ny rano, araka izay kely azo atao mba hikosehana rano. Raha tsy maintsy ampiasaina ny rano dia diovy izy io mba hisorohana ny rano tsy hiditra ao ambadiky ny solaitrabe manaraka ny seams.
Fanadiovana eo an-toerana ny loto. Ireo mpanadio asidra mety dia tsy dia atahorana kokoa noho ny mpanadio alika ary tokony hosotroina rano araka izay azo atao.
Ny fandidiana hafa amin'ny tany mba hiarovana ny tany, toy ny loko vita amin'ny rindrina sy ny rano fitaratra dia handoto ny tany.
Misafidy ny vahaolana vovoka electrostatic mety hiatrehana ny tany, raha tsy izany dia handoto ny tany.